Muvara weArabia heti yakarukwa ine maburi uye isina maburi
Makomputa ane mavara eheti dzakarukwa, mavara akasiyana-siyana, mazhinji machena, anopfekwa nevarume vechiMuslim zuva nezuva, saizi yevakuru: 54-58CM, vana: 50-53CM, fashoni, inotungamira fashoni yeheti dzeMuslim.
All-season accessories zvekushandisa kwemazuva ese-Iyo nyoro yekotoni yakanakira kushandiswa kwechirimo, ichibvumira ganda rako kufema, uku ichipawo kudziya kwakaringana kwemazuva anotonhora. Imwe bhenefiti yekotoni ndeyekuti inogona kuzvibvisa kunhuwirira, saka inoda kushoma kugezwa pane zvigadzirwa zvekugadzira zvakaita sepolyester.
Yakasarudzika dhizaini-Iyi ngowani yakarukwa yemuvara weArabia ine maburi uye isina maburi inzvimbo yakasarudzika uye yepamusoro fashoni. Isu tinopawo kune varume vemazuva ese vanoda kuve vakanaka uye vakapusa. Ehe, isu tinoda kuve nemukurumbira wequirky fashoni, asi ngatisakanganwe kuti pane nguva dzose runako mukureruka.
Yakagadzirwa nezvinhu zvechisikigo, yakanakira ganda rako-iyi ngowani yakasarudzika yakagadzirwa ne100% donje uye yakanakira kushandiswa kwezhizha sezvo inobvisa unyoro uye inogadzirisa kupisa kwemusoro. Asi chinhu pamusoro pekotoni swabs ndechekuti ivo vakakodzerawo muchando; vanotaridzika vakashongedzwa vachichengeta kudziya-yakanakisa-mwaka wese chinhu
Anti-static, self-deodorizing-cotton inogona kuderedza ngozi yekunhuwa uye kunwa mvura, nokuti isu tose tinoziva kuti chinhu chakaipisisa ibhinzi duku! Iwe unogona zvakare kusiya bvudzi rako matambudziko pamusuwo, nekuti Doudou ane anti-static zvivakwa, haufanirwe kunetseka nezve zuva rakashata.
Huremu uye inochinjika-Hati dzakashongedzwa dzakagadzirirwa kupa yakanakisa kukwana uye yakachena contours. Ehe, isu tine anopenga fashoni mafambiro, asi isu tinogara tichitenda emhando yepamusoro uye akapusa madhizaini anoenderana nemunhu wese.
Zvakapfuura: Muslim hijab hat yeMuslim vana vechidiki uye vakuru
Zvinotevera: Yakapfava uye Yakagadzikana yeArabia chena ngowani
Wool Kufi, Muslim Cap Black, Mens Mosque Hats, Ciput Hijab, Hijab Dupatta, Best Muslim Cap,